China Ọdịdị kacha ọhụrụ na ekwentị mkpanaaka chaja smart ekwentị chaja PD100W rụpụta na ụlọ ọrụ | Eletriki Electric
1. Obere ìhè kọmpat udi na n'akpa uwe-enyi na enyi size.
2. Ultra ngwa ngwa odori ikike na-azọpụta ruo ihe dị ka 50% oge.
3. Multi elu ike USB (A / C) ọdụ ụgbọ mmiri maka mobile ngwaọrụ.
5. Kasị elu arụmọrụ ruo 94%.
6. ọgụgụ isi ike nkesa maka mobile ngwaọrụ.
*Multi Usb C Fast Charger 100W Nkọwa nkọwa
USB chaja mgbidi chaja dị mma maka ndị ọrụ chọrọ chaja kọmpat nke dị fechaa ma dị ike. Mmepụta ruru 100 W, PD chaja mgbidi niile ọkacha mmasị gị ngwaọrụ gụnyere ekwentị gị, Nintendo Gbanye, na MacBook (oge nkwụnye ụgwọ dabere na ụdịdị ngwaọrụ).
Igosipụta mgbanwe ọhụrụ ọhụụ na teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nnyefe ike USB-C na nkwụnye ụgwọ ọsọ ọsọ, otu chaja a bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka ngwaọrụ gị dị ugbu a wee nọrọ n'ihu usoro maka eletrọniki ọ bụla n'ọdịnihu. Portsgbọ mmiri abụọ ahụ nwere ike ịnyefe 18 watts nke ụgwọ ọkụ dị elu na ihe niile site na smartphones na mbadamba na laptọọpụ USB-C ike agụụ na-agụ dị ka Macbook 12-inch. Na-akwado ngwa ngwa maka iPhone iji kwụọ ụgwọ iPhone 8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị site na efu ruo 50% na 30 nkeji na eriri USB gụnyere, na smartphones ndị ọzọ / mbadamba na ọsọ ọsọ.
Kwadoro site na GaN tech, chaja a bụ 30% pere mpe karịa chaja ndị ọzọ, dakọtara ọnụ iji soro gị gaa ebe ọ bụla ị na-aga. Ngwunye chaja 100W PD a na USB-power nnyefe pụtara ngwa ngwa ịgba ụgwọ maka ngwaọrụ USB-PD gị. Emere chaja a na-eme njem USB nke chaja abụọ iji wepụta ikike 5 nke chaja ọkọlọtọ ugboro 5 n'ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge. Igosipụta mgbanwe ọhụrụ ọhụụ na teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nnyefe ike USB-C na nkwụnye ụgwọ ọsọ ọsọ, otu chaja a bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka ngwaọrụ gị dị ugbu a wee nọrọ n'ihu usoro maka eletrọniki ọ bụla n'ọdịnihu.
PD chaja mgbidi na ndakọrịta na mgbanwe dị elu, ngwọta abụọ na-akwụ ụgwọ nke nwere ike ịkwado ngwaọrụ USBC na USBA niile dị ka ekwentị na aptops iji rụọ ọrụ ma ọ bụ n'otu oge. Ihe nkwụnye mgbidi USB na nhazi nkwụnye mgbanwe na-enye gị ohere izere igbochi mkpọchi ndị ọzọ ma weghachite ọdụ ụgbọ mmiri USB A / C maka ntinye dị mma nke eriri ejikọrọ - ọkachasị bara uru mgbe ị na-eji eriri ike ma ọ bụ onye na-eche nche na ọtụtụ ntanetị. USB PD chaja mgbidi ya na ọgụgụ isi ike, na-eme ka arụmọrụ dị elu maka otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwaọrụ.
*Multi USB Ndenye chaja 100W oke
Akụkụ: 63 * 63 * 30.5mm
Ike dị ukwuu 100w Gan Pd chaja
Na-enye nnukwu 100W nke ịchaji ike - zuru ezu iji kwụọ 2 laptọọpụ USB-C na 2 smartphones n'otu oge. Mmepụta USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A. USB-A Npụta 5V = 2.4A max kwa ọdụ ụgbọ mmiri.
Nkesa nke nwere ọgụgụ isi Macbook Pro Ceriri
Na-enye ihe ruru 100W nke ịchaji ike mgbe ejiri otu ngwaọrụ jikọọ na ọdụ USB-C, ma ọ bụ na-ekesa ihe nrụpụta ruo ngwaọrụ ejikọrọ 4. Nke a na-enyere ọsọ ọsọ ọsọ maka ngwaọrụ ndị ọzọ n'otu oge.
Universal Ndakọrịta QC 3.0 Wall chaja
Achọpụtara maka arụmọrụ na-enweghị ntụpọ na USB-A na USB-C igwe, mbadamba, laptọọpụ, na ndị ọzọ, gụnyere 15-inch MacBook Pro, 2018 MacBook Air, na 13-anụ ọhịa Dell XPS, wdg.
Fast Nchaji Multi USB Ndenye chaja
Nke ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na volta dị elu ma gbanwee oge nke na-ebute chaja pere mpe ma rụọ ọrụ nke ọma
Osote: Ike njem dị elu nke 65W ụdị c pd USB chaja PD65W